बजार बन्द गराउन हिँडेका पूर्वमन्त्री झाको टा’उकोमा प्रहरीको ला’ठि परेपछि…. – Online Nepalaja
बजार बन्द गराउन हिँडेका पूर्वमन्त्री झाको टा’उकोमा प्रहरीको ला’ठि परेपछि….
February 4, 2021 100
जनकपुरमा प्रहरी र नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षबीच भएको झ’ड’पमा दुई पूर्वमन्त्री घाइते भएका छन्। पूर्वमन्त्री रामचन्द्र झा र मातृका यादव घा’इते भएका हुन्।
यसैगरी सहिदनगर नगरपालिकाका मेयर उदय बरबरिया, कारी यादव, प्रदीप साह र प्रहरी जवान लालबाबु राई घा’इते भएका छन्। जनकपुर धाममा बजार बन्द गराउन हिँडेका प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झ’ड’प भएको हो। बजार गराउन जनकपुरधामको शिव चोक पुगेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले अवरोध सृजना गरेपछि झ’ड’प भएको थियो।
सोही क्रममा प्रहरीले गरेको लाठीचार्जबाट नेता झा र यादवसहितका नेता घाइते भएका हुन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको छ। झ’डपको क्रममा प्रहरीले ला’ठी’चा’र्ज गर्नुका साथै १ दर्जन राउन्ड हवाइ फायर समेत गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ।
यता प्रहरीले दाहाल-नेपाल समूहका दर्जनौं कार्यकर्तालाई पक्राउ समेत गरेको छ। दाहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले ना१क ५१२ नम्बरको प्रहरीको भ्यान र ज१च १५७० नम्बरको मालसमान ढुवानी गर्ने गाडीमा तो’ड’फो’ड गरेका छन्।
Prevअस्ट्रेलियामा अध्ययनरत विराटनगरका एक नेपाली विद्यार्थीको निधन
Nextपूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अहिले सम्मकै कडा चेतावनी, कुर्सिका लागि निर्लज्ज भयौ सह्य हुन्न